Istudiyo sabucala kunye nekhitshi / ibhafu. Akukho ndawo ekwabelwana ngayo.
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguAnna
Yonwabela imfihlo yesitudiyo sethu esiqaqambileyo, esicocekileyo esinebhedi yokumkanikazi, ikhitshi, i-soaker tub / ishawa yesandla, kunye nepatio yegadi yabucala enomthunzi. Isitudiyo sinesango lokungena elahluke ngokupheleleyo kwindlu enkulu. Indawo esembindini ibekwe i-1 min ukuhamba / ibhayisekile ukuya eSafeway, Starbucks, kunye nevenkile ethengisa utywala, eneendlela ezingaphaya eziyakukusa eLakeside park. Kulula kwaye kumnandi ukuhamba nge-10min ukuya kwiivenkile ezinkulu kunye neeresityu / ii-pubs edolophini yeNelson. Indawo ayinakubethwa. I-Pet-friendly!
Ikhaya elihle le-1905 kwikona enkulu, yabucala, enomthunzi. Kukho ipatio ekhuselweyo ngaphandle kweengcango zestudiyo zaseFransi ukuze uphumle kwaye uphumle ngesiselo sangokuhlwa okanye ikofu yasekuseni. Kwi-suite kukho i-Smart TV eneNetflix kunye nentambo efakiweyo. Sijonge ukwenza ukuhlala kwakho kuphumle kwaye kungakhathali njengoko sinako, ke ukuba unazo naziphi na izicelo phambi kohambo lwakho, cela nje!
4.77 out of 5 stars from 123 reviews
4.77 · Izimvo eziyi-123
Ubumelwane obupholileyo kunye nobuhle obunemithi yomthunzi ovuthiweyo emazantsi e-Fairview enenduli kunye neendawo eziNyuleka. Umhlaba othe tyaba ukuze kube lula ukuhamba / ukukhwela ibhayisekile ukujikeleza. Kufuphi nechibi kunye neereyile kwiindlela.
Ndingumhlali wakwaNelson ixesha elide onokuthi aphendule uninzi lwemibuzo yakho malunga nendawo yethu entle kwaye ukuba andikwazi, ndiyamazi umntu onako! Ndihlala kwindlu enkulu, eqhotyoshelweyo kodwa yahlukene. Ndihlala ndifumaneka kwiimfuno zakho kwaye ndijonge ukwenza ukuhlala kwakho eNelson kube mnandi njengoko kunokubakho! Ungaze uthandabuze ukufikelela kuyo nayiphi na imibuzo- ndilapha ukunceda.
Ndingumhlali wakwaNelson ixesha elide onokuthi aphendule uninzi lwemibuzo yakho malunga nendawo yethu entle kwaye ukuba andikwazi, ndiyamazi umntu onako! Ndihlala kwindlu enkulu, e…